6 Yakaderera Budget Yemukati Yekutengesa Pfungwa dzeMabhizinesi Madiki Martech Zone
Unotoziva kuti hauna bhajeti rekushambadzira kukwikwidza ne "vakomana vakuru." Asi nhau dzakanaka ndidzo: nyika yedhijitari yekushambadzira yakaenzana munda zvisati zvamboitika. Mabhizimusi madiki ane nzvimbo dzakawanda uye mahunyanzvi ayo ese ari maviri anoshanda uye anodhura.
Imwe yeiyi, hongu, ndeye zvemukati kushambadzira. Muchokwadi, inogona kuve yakanyanya mutengo-inoshanda kune ese marongero ekushambadzira. Heano zvemukati zvekushambadzira matekiniki ayo ese madiki mabhizinesi anofanira kunge ari kushandisa:
Networking uye Kubatana
Mabhizinesi emuno anonzwisisa kukosha kwekubatana - kutanga hukama nemamwe mabhizinesi munharaunda kuti mubatsirane. Mune izwi redhijitari, zvakafanana zvinogona kuitwa. Networking inogona kuitika nenzira dzinoverengeka:
Gadzira a LinkedIn profile uye kujoina ese akanangana nemapoka. Tora chikamu munhaurirano mukati memapoka aya, zviite kuti uzivikanwe sehunyanzvi mune rako bhizinesi niche, uye gadzira kubatana. Iko kubatana kunogona kukonzera bhizinesi kuuya nenzira yako, kuburikidza nekutumirwa uye kurudziro.
Tsvaga mabhizinesi anoenderana uye mablog uye ugadzire hukama nevaridzi ava / blogger. Gadzira hukama hunobatsira, uchikurudzirana. Ziva, zvakadaro, kuti hukama uhwu hunofanirwa kunge hune masosi ane mbiri uye ane hukama, kana iwe unogona kutambura SEO zvirango.
Paunoseta hukama hwepamuchinjikwa, funga kubatana kuburikidza nemishandirapamwe yekushambadzira, coupon zvinopihwa, nezvimwe. Izvi zvichawedzera hwaro hwevatengi uye nekuparadzira chiratidzo chako kune vamwe vateereri.
Ichi chishandiso chenguva refu chekushambadzira asi chinogona kushanda. Mutengo wacho? Yakawanda yakanaka yenguva uye kuyedza kugadzira zvinomanikidza uye zvine chekuita nemablog mablog ayo ako anotengesa musika anoona akakosha Zvinyorwa zveBlog zvinofanirwa kugadzirisa matambudziko kune vako vangangove vatengi; ivo vanofanirwa kuve vakasikwa kunyorwa; ivo vanofanirwa kusanganisira zvinoonekwa uye zvimwe midhiya; zvinofanirwa kuve zvinogoverwa zviri nyore; uye zvinofanirwa kuve nyore kuverenga nekutarisa.
Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve blogging nekuverenga akakurumbira uye akabudirira mablog eako makwikwi uye akaenzana niches. Dambudziko rako rinenge risiri rekugadzira zvidimbu izvi asi kuenderana uye kugara uchishambadzira. Kune zviwanikwa uye maturusi anogona kukubatsira iwe kuita izvi.
Kana iwe uchitsvaga vanyori vechibvumirano, unogona kuyedza mamwe masevhisi ekunyora ane mabasa ekunyora, senge EssaySupply or FlashEssay.
Kana iwe uchida kutsvagisa, unogona kuwana OnlineWritersRating uye tora wongororo dzemakopi ekunyora mabasa emahofisi epamusoro
Tarisa uone nzvimbo dzinopa vanozvimiririra vanyori, senge Upwork uye Fivver. Unogona kuongorora ruzivo rwevanyori uye budiriro uye edza vashoma kunze.
Kana iwe ukasarudza kunyora nekuchengetedza blog iwe pachako, kana kunyangwe kana ukasarudza kushandisa vane kontrakiti vanyori, iwe uchazoda kuuya nemusoro wenyaya mazano kune iwo mablog. Nzira yakanakisa yekuita izvi ndeyekutarisa kune vako vanokwikwidza uye uone kuti ndezvipi zvezvinyorwa zvavo zviri kunyanya kufarirwa. Tora iwo mazano uye uvandudze paari. Iwe unogona zvakare kutarisa kunze saiti senge Buzzsumo kuti uwane iwo akanyanya kufambiswa misoro mune yako niche.
Dhizaina Elevator Pitch
Iwe unoda yekugadzira 30-yechipiri nhaurwa iyo iwe yaunogona kushandisa chero nguva, chero nzvimbo, kana mumwe munhu akabvunza, Unoiteyi? Inonzi an elevator pitch nekuti iwe unofanirwa kuve uchikwanisa kupa iyo yakazara munguva inotora kukwira erevheta kumusoro kana pasi. Iyi pani inofanirwa kuve yakagadzirirwa kugadzira uye kutarisa pane kukosha kwaunounza kune ako vatengi / vatengi. Unogona kudzokorora zvimwe yakakura maeleti pombi mienzaniso uye fashoni imwe yako. Bata nemusoro. Uye gadzirira rako rebhizinesi kadhi kugadzirira panguva imwe chete.
Kunyange vazhinji vachifunga kuti email haichashande (mabhokisi emabhokisi evanhu akakamirwa pamuromo nekusimudzira uye kushambadza), izvi handizvo zvazviri. Muchokwadi, paavhareji, iyo dzoka kune yega $ 1 yakashandiswa kushambadza neemail i $ 38. Izvo zvakanaka-zvinodhura.
Chinokosha ndechekuti uzviite zvakanaka zvekuti vanhu vanoongorora maemail avo vachada kuvhura yako. Heano mamwe matipi.
Usave spammer. Usatenge zvinyorwa uye utumire akawanda maemail - haashande
Zvishoma nezvishoma kukura runyorwa rwako nekutora vanyoreri kuburikidza nedzimwe nzvimbo dzako dzemukati - webhusaiti yako, yako blog, yako yemagariro midhiya chiteshi
Sarudza zvinyorwa zvako zvinoenderana nekwauri kutarisira / vatengi vari murwendo rwavo rwekutenga. Ivo vanofanirwa kugamuchira maemail akasiyana.
Dzidza maemail aunowana iwe pachako kubva kumabhizinesi ari kukufadza. Chii chinoita kuti iwe uvhure mamwe acho kwete mamwe? Izvi zvinofanirwa kukupa iwe mamwe mazano akanaka nezvekugadzira yako wega.
Tarisa pane wenyaya mutsara. Kana iri yekumanikidza, iwe une mukana wakakura kwazvo wekuvhura. Shandisa zviripo maturusi ekugadzira misoro mikuru, kana iwe usinga zive kugadzira wega. Uye, maturusi aya anogona zvakare kushandiswa kune misoro yemusoro / misoro yemablog ako uye enhau enhau.
SaShelly Crawford, Musoro weDhipatimendi Rezvinhu pa InotangazveCentre, inoti: “Zvakatitorera nguva kuti tizive zvese izvi zvekushambadzira email. Isu tanga tichingokanda maemail kunze uko, tichitarisira kuburitsa kunyangwe diki muzana yemhinduro. Kana tangoita sarudzo yekuita izvi zvine musoro, kushandisa dhata uye zvikamu, pamwe nehunyanzvi hunodiwa mumisoro yezvidzidzo, takaona mukana wakakura mukuvhura.
Izvi zvinopera pasina kutaura. Uye iwe pamwe wakaverenga zvakakwana nezve zvemagariro media kushambadzira kuziva zvinotevera:
Iwe haugone kuve papuratifomu yega yega - iwe uchazviparadzira wakanyanya kuonda uye usakwanise kuchengeta chero chazvo zvakanaka.
Chris Mercer, CEO we Citatior, anozviisa seizvi:
Vatengi vedu vadiki, kunyanya vadzidzi. Isu tinotarisa paFacebook, Instagram, uye Snapchat nekuti tinoziva kuti tichavawana ipapo. Zano rangu nderekuenda chete kwaunoziva kuti kune huwandu hwakawanda hwevateereri vako uye unyore zvakanyanya uye kazhinji sezvinobvira. Iwe unowana mhedzisiro.
Ita tsvagiridzo kuti uwane uko vateereri vako vari pane vezvenhau, uye tora mapuratifomu maviri epamusoro kuti umise huvepo hwako. Wobva watumira nguva dzose pane izvozvi. Izvi zvinogoneka.
Funga nezve theme yenyaya dzako. Iyo poindi iri kuumba hukama hwehukama uye hukama nevateereri vako. Iwe unogona kuva nejee yezuva, chirevo chinokurudzira chezuva racho. Vateveri vacharamba vachidzoka uye vagogovana.
Sanganisira vatengi vako - shandisa ongororo uye mibvunzo; shandisa vatengi mune zvako zvinyorwa. Ratidza divi revanhu bhizinesi rako. Mabhizinesi mazhinji ari kuita zvinhu izvi nemazvo. Vatevere uye tevedzera maitiro avanoita zvinhu.
Zviratidzo uye Midhiya - Iwe Haugone Kuita Pasina Izvo
Chikwereti chemufananidzo: Neomam
Maererano ne tsvakurudzo, vanhu vanoteedzera madhairekitori nezvinyorwa uye mifananidzo vanoita 323% zvirinani pane vanhu vanoteedzera mafambiro vasina mifananidzo.
Hazvina kumbobvira zvakave nyore kushandisa zvinoonekwa (mapikicha, infographics, mifananidzo, uye kunyangwe mifananidzo) mune zvemukati. Uye mavhidhiyo ave akanyanya kuzivikanwa mashandiro ekutora zvemukati kuyambukira kune vateereri. Vanhu vanoona vhidhiyo zvakanyanya kupfuura kuverenga yakawanda zvinyorwa.
Kutsvaga kweGoogle maturusi ekugadzira chero eaya anoonekwa kunounza huwandu hukuru, hwakawanda mahara. Iko hakuna chaicho chikonzero chekutadza kuburitsa sezvakawanda mavhidhiyo uye mavhidhiyo sezvaunogona kuunza zvigadzirwa zvako kana masevhisi, kuratidza iwe nechikwata chako, kutsanangura kana kupa sei-kuti kudzidziswa, nezvimwe.
Iwe unogona kutoyedza neakawedzera uye chaiwo chaiwo zvirimo - kune maturusi ekuti izvi zviitwe futi.
Rangarira izvi: mutengi wanhasi anoda kuona chokwadi kubva kumabhizinesi. Kuva chidiki cheamateur mukugadzirwa kwako kwemaonero uye mavhidhiyo inzira yakanaka yekuita izvi. Izvo zvishoma zvakarongeka, zvirinani.
Saiye muridzi webhizinesi diki, yako nguva yakakosha. Asi kushambadzira kunofanirwa kuve chikamu chikuru chenguva uye nesimba raunoshandisa. Iwe haugone kukura pasina iyo. Asi kushambadzira hakufanirwe "kupaza bhangi" sekureva kwako bhajeti. Iwe une zvakawanda zvingasarudzwa izvozvi zvekushomeka-kushambadzira - zvishandise.
Tags: buzzumochris mercercitatiorelevator pitchEmail MarketingrondedzeroupplyFivverflashessayheadlinesneomannetworkingonlinewrongtongsresumescentrepasocial networkkuvandudza